Ka-hortagga, sababaha iyo daaweynta murqaha foosha | Ragga Stylish
Murqaha murqaha ayaa ka mid ah dhaawacyada ugu badan ee la soo gaari karo. In kasta oo ay inta badan la xiriiraan ku dhaqanka dhaqanka, qof kasta oo la kulma xanuun muruqa ah.
Shaqada dabiiciga ah ee muruqyada bini'aadamka waxay ku saleysan tahay foosha iyo nasashada joogtada ah. Dhibaatadu waxay muuqataa marka mid ama koox murqaha ah lagu hayo xiisad joogto ah oo aan khasab ahayn. Tani waxay abuurtaa raaxo-darro iyo xanuun.
Guud ahaan, kuwani maahan dhaawacyo halis ah. In kastoo kiisaska oo dhami isku mid ahayn, dhacdooyinka badankood waxay usbuucii soconayaan celcelis ahaan. Ilaa iyo inta qofka ay dhibaatadu saameysey si wax ku ool ah uga qayb qaataan soo-kabashadooda.
1 Sidee qandaraasyo u dhacaan?
2 Waxyaabaha kale ee saameynaya qandaraasyada
3 Dhibaatooyinka afka: asal lama filaan ah
4 Ayaa ku dhici kara dhacdooyinka foosha muruqyada?
5 Noocyada qandaraaska muruqyada
7 Daawooyinka dabiiciga ah ee qandaraaska muruqyada
Sidee qandaraasyo u dhacaan?
Sababaha keeni kara muuqaalka muruq qandaraas aad ayey u kala duwan yihiin. Xaalado badan Waxay la xiriiri karaan waxqabadyo xad-dhaaf ah ama, liddi ku ah, jimicsi la'aan iyo dhaqdhaqaaq la'aan.
Waxyaabaha ugu caansan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Jir dhis samee. Guud ahaan, ka dalbashada xoog aad u xoog badan muruqyada badanaa waxay sababaan cillado noocan ah. Waa inaynaan ku xad gudbin miisaanka xad-dhaafka ah ee jimicsiga iyo nolol maalmeedkeena; gaar ahaan haddii aadan haysan diyaarinta lagama maarmaanka ah.
Nafaqo xumo. Cunto isku dheelitiran waa qayb lagama maarmaan ah caafimaadka iyo xaalada wanaagsan ee jirka bina aadamka. Muruqyada kama baxsadaan baahidan. Gaar ahaan, yaraanta potassium iyo magnesium-ku waxay badanaa la xiriiraan noocyada dhaawacyada kala duwan.
Fuuqbaxa. Aad ayey muhiim u tahay inaad cabto qiyaas wanaagsan oo biyo ah maalintii Qof kasta iyo in ka badan haddii ay timaado cayaartoyda, fuuq-celinta habboon waa isha caafimaadka.
Waxyaabaha kale ee saameynaya qandaraasyada
Hab-nololeedka fadhi-ku-dirirka ah waxaa had iyo jeer la socda tiro badan oo cilladaha ah. Tusaalooyinka waa qallooca jirka iyo luminta awooda iyo adkeysiga. Waa wax iska caadi ah ragga iyo dumarka nolosha adag ku noolaada inay ku xanuunsadaan murqaha.
Cadaadisku waa mid ka mid waxyaabaha kiciya ee soo noqnoqda. Xiisaddu waxay u egtahay inay ku soo ururto aagagga sida qoorta ama qaybta sare ee dhabarka, taasoo keenta raaxo-darrada sida xooggan ee ay u tahay mid joogto ah.
Dadka qaarkiis waxay leeyihiin dhacdooyin muruq aan qasab ahayn inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Difaac ahaan, neerfayaasha ayaa qandaraas iskudayaya inay diirimaad yeeshaan. Cillad-darradu waxay timaaddaa markay dib u kala bixin waayaan xoogaa, dhaqdhaqaaq jireed oo yar awgeed.
Dhibaatooyinka afka: asal lama filaan ah
In kasta oo aysan ahayn wax caadi ah in la maqlo qandaraasyo murqo oo laga soo qaaday dhibaatooyinka afka, tani waa qodob kale oo sababi kara dhibaatadan. Su'aashani waxay si gaar ah ula xiriirtaa oo leh kiisaska Cudurka 'Syndrome Occlusion Syndrome'.
Waa a isbeddel daran oo ku saabsan iswaafajinta ilkaha, marka lagu daro luminta codka ee muruqyada afka. Bukaannada qaba kiisaska horumarsan, marka lagu daro dhibaatooyinka qaniinyada iyo madax xanuun badan, waxay sidoo kale lahaan karaan qoorta joogtada ah iyo raaxo-darrada dhabarka.
Si loo daaweeyo sawirkan caafimaad, qofka ay dhibaatadu saameysey waa inuu raadsadaa caawimaadda dhakhtarka ilkaha iyo dhakhtarka jimicsiga jirka. In kasta oo aysan iyagu ahayn dhacdooyinka ugu badan, bukaanjiifka qaar ayaa la xanuunsanaya xanuunka lugaha iyo cagaha.
Ayaa ku dhici kara dhacdooyinka foosha muruqyada?
Qof kasta, iyadoo aan loo eegin jinsiga ama da'da, wuxuu u nugul yahay inuu ku xanuunsado dhaawaca noocan ah. In kasta oo tirakoob ahaan loo hadlo, haddana waa iska caadi in laga bilaabo da'da 20-ka qof ay u badan tahay inay soo bandhigaan sawirradan. Waxyaabaha kale, maxaa yeelay waxay kordhiyaan heerarka tartanka, waxqabadka isboortiga iyo walbahaarka ayaa badanaa muujiya.
Dhakhaatiir jimicsi badan ayaa fiirisay walaaca kiisaska carruurta ku kordhay. Dhibaatooyinkaas asalkoodu wuxuu noqon lahaa isticmaalka xad-dhaafka ah ee qalabka sida qalabka ciyaarta ee fiidiyoowga ah ama taleefannada casriga ah. Cunno xumida carruurta yaryar ee guriga ku jirta ayaa waliba sababi karta u nuglaanshaha muuqaalka qandaraasyada.
Noocyada qandaraaska muruqyada
Kuwa ugu caansan waa kuwa ku dhaca jimicsiga jirka oo xad dhaaf ah ama kadib.. Waxa kale oo jira wicitaanada haraaga ah, oo ay weheliyaan dhaawac dheeraad ah. Magacaabista kale, marka loo eego asalka, waa:
Dhibaato kadibSidoo kale loo yaqaan qandaraasyada difaaca. Waxaa la soo saaraa ka dib markii mid ama koox muruqyo ah ay ku dhacdo saameyn xoog leh. In kastoo ay yihiin kuwa ugu dhibka badan, Badanaa waa la qafiifiyaa iyada oo aan la faragelin caafimaad laba illaa saddex maalmood gudahood.
Boostada: inta badan waxaa sababa dhaqan xumo marka la fadhiyo. Si kastaba ha noqotee, qaabab khaldan oo socod socod ama istaag ah ayaa sidoo kale eedeyn u noqon kara xaaladahan. Waa dhaawacyo si tartiib tartiib ah loo soo saaray.
By hypotonia: oo caan ku ah "murqaha murqaha". Waxaa ku xanuunsada dadka leh muruqyo daciif ah ama culeyskoodu hooseeyo. Waxay badanaa soo muuqdaan marka foosha ka xoog badan sidii caadiga ahayd looga baahdo muruqa.
Daaweynta ugu fiican ee qandaraaska muruqa waa inaad sameyso wax walba oo awoodaada ah si aad uga fogaato.. Tani waxay ku dhacdaa iyadoo la ilaaliyo cunto wanaagsan iyo fuuq habboon. Sidoo kale adoo si sax ah u kala bixinaya una kulaalaya murqaha ka hor jimicsiga, marka lagu daro ka fogaanshaha qaab nololeedka fadhiidka ah.
Markay xaaladdu horay u tahay fait fulin, tallaabada ugu horreysa ee la qaado waa nasasho oo la dhigo aagga ay dhibaatadu saameysey nasto. Haddii dhacdadu dhacdo inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jirka, waa in isla markiiba la joojiyaa.
Had iyo jeer waa lagugula talinayaa inaad aragto takhasusle, iyo sidoo kale iska ilaali is-daweynta. Booqashada dhakhtarka jimicsiga jirka ayaa muhiim noqon doonta haddii xaaladdu ay sii dheeraato toddobaad ama ay saameyn ku yeelato howlaha maalinlaha ah. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda haddii ay jiraan mudacyo, cuncun iyo khalkhal hurdo.
Daawooyinka dabiiciga ah ee qandaraaska muruqyada
Waxaa jira dhowr farsamooyin guryo ah oo lagu daaweeyo qandaraaska muruqyada:
Dhir badan waxay bixiyaan udgoon caafimaad leh, oo leh saameyn dejin ah oo yareynaya buuqa iyo murqaha. Dhirtaas waxaa ka mid ah miraha, rosemary, lavender, eucalyptus, calendula, iyo kuwo kaloo badan.
Qubayska lagu daweeyo. Waxaa lagu sameeyaa noocyo cusbo ah oo kala duwan, oo lagu daro saliid muhiim ah.
Kareemada iyo boomaatada. Saliidda qumbaha, ubaxyada arnica iyo iniinaha, iyo xitaa budada cayenne waxay qayb ka noqon karaan kareemada iyo boomaatada waxtarka badan leh ee lagu daweeyo qandaraasyada.
Jimicsi iyo isboorti. Isboortiga iyo jimicsiyada sida Yoga, Tai Chi iyo Pilates ayaa la muujiyey inay yareynayaan halista dhaawaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Murqaha shaqada